Nyika Marichi paAlpe Adria - Nyika yaMarch
musha » Noticias » Press Notes » Nyika Marichi paAlpe Adria
Nyika Marichi paAlpe Adria
13 / 02 / 2020 13 / 02 / 2020 kubudikidza Antonio Gancedo
Mharidzo yeNyika yechipiri Kurume kune Runyararo uye kusarerekera kuAlpe Adria nemugovera, Kukadzi 2 kuCafé San Marco, muTesteste
Nyika yechipiri Kurume for Peace and Nonviolence 2019-2020 ichamira kubva munaFebruary 24 kusvika 27 muAlpe Adria, pakati peCroatia, Slovenia neItari, nepo vhiki ino ichave muBerlin, Prague, Paris neVienna.
World March for Peace muAlpe Adria ichaunzwa kune veruzhinji uye mutepanhau muTesteste nemugovera, Kukadzi 15 na11 mangwanani paSan Marco kofi-chitoro chebhuku muVia Battisti 18.
Vamiriri vevanosimudzira chirongwa ichi vachatora chikamu mune humbowo, seMaguta eUmag (Croatia) Piran uye Koper (Slovenia) Muggia, San Dorligo - Dolina, Fiumicello - Villa Vicentina, Aiello del Friuli neDunhu Coordination of Authorities Matangiro eRunyararo uye Kodzero Dzevanhu.
Vatauri vanosanganisira mutevedzeri wameya weUmag Mauro Jurman, Austrian pacifist Alexander Heber, Monique Badiou wedare rekusimudzira Fiumicello, muongorori weCern kuGeneva Fulvio Tessarotto, aimbova director we Psychiatric Services Roberto Mezzina, boka renhengo. yeEthical Bank naPaola Machetta, meya weAiello Andrea Bellavite.
Akokwa kuti aende kumasangano mazhinji anotsigira chirongwa ichi, akakurudzirwa muTesteste naMondloosenzaguerre uye pasina mhirizhonga uye Danilo Dolci Runyararo uye Dare Rekubatana. Isu tinoda zvakare kutenda Coop Alleanza 3.0 nerutsigiro rwavo.
World March ichamira musi waFebruary 24 kuUmag, munaFebruary 25 muPirani, musi waFebruary 26 kuKoper, Muggia / Dolina uye Trieste, nomusi waFebruary 27 muPesteste neFiumicello - Villa Vicentina.
NeSvondo, Kukadzi 16, kubatana kweInternet kuchaitwa mangwanani pamwe nevaratidziri nevanoratidzira kubva kuVienna.
Muvhidhiyo iyi yakanaka sevhisi yeTele Koper, iyo muna Chivabvu 25, 2018 yakapa rondedzero yekutanga yenhanho iyi nehanya zvakanyanya kumahara ezvinyukireya, Trieste naKoper.
Kudhirowa: Alessandro Capuzzo
Mufananidzo uri kumusoro kumusoro unomiririra chiratidzo chevanhu cheRunyararo, chakagadzirwa muPiazza Unità nevatori vechikamu chekutanga Nyika Kurume, paNovember 7, 2009.
Iyo Kurume paZuva raValentine
Musangano neInternational Peace Bureau